जनताको भावना, वर्तमानको सम्भावना नै मेरो चुनावी प्रतिवद्धता हो : शाही – ebaglung.com
जनताको भावना, वर्तमानको सम्भावना नै मेरो चुनावी प्रतिवद्धता हो : शाही
२०७६ मंसिर ११, बुधबार ०८:०९	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
बागलुङ जिल्लाको साविकको बोहरागाउँ गाउँ विकास समिति तथा हालको निसीखोला गाउँपालिका वडा नं. ३को बोहरागाउँमा जन्मनुभएका एक क्रियाशील, सचेत र सामाजिक व्यत्तित्वका हिसावले खिमविक्रम शाही चिर परिचित व्यत्तित्व हुनुहुन्छ । विक्रम सम्वत २०२७ साल असोज २६ गते बाबा हिरा बहादुर शाही र आमा चनकुमारी शाहीको कोखबाट दोश्रो सन्तानको रुपमा जन्मनुभएका शाही, विद्यालय जीवनबाटै सचेत विद्यार्थी आन्दोलन र खेलकुदमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । प्रभा माध्यामिक विद्यालय बोहरागाउँमा प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गर्नुभएका शाहीले उत्तर गंगा माध्यमिक विद्यालय बुर्तिवाङबाट २०४६ सालमा माध्यमिक तहको शिक्षा पुरा गर्नुभएको थियो । विभिन्न उतारचढावका कारण उहाँका उच्च शिक्षा भने अधुरो रह्यो । विक्रम सम्वत २०४० सालमा अखिल नेपाल बाल संगठनमा संगठित भई राजनीतिक यात्रा शुरु गर्नुभएका खिमविक्रम शाही, अखिल (छैठौं) हुँदै वि.सं. २०४७ सालदेखि अखिल नेपाल युवक संघको बागलुङ जिल्ला उपाध्यक्ष समेत बन्नुभयो । वि.सं. २०५४ सालदेखि अस्थायी शिक्षकका रुपमा स्थानीय प्रभा माध्यामिक विद्यालयमा शिक्षण पेशा सुरु गरेदेखि पेशागत आन्दोलनमा पनि सक्रिय हुनुभएका शाही, २०६५ साल देखि राष्ट्रिय जनमोर्चा बागलुङको जिल्ला समितिमा रहेर क्रियाशिल हुनुभयो । सचिवालय सदस्य समेत रहनु भएका शाही, समाजमा हुने अन्याय, अत्याचार, विभेद, असमानता लगायत विभिन्न सामाजिक विभेदका विरुद्ध संघर्षरत क्रियाशील राजनैतिक पात्रका रुपमा परिचत हुनुहुन्छ । शाहीले सामाजिक रुपमा पनि, विद्यालय, जलविद्युत, स्वास्थ्य, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र तथा बाटोघाटोको विकास निर्माणमा समेत सत्रिय भुमिकामा रहँदै आउनुभएको छ ।
समुदाय र समाजमा रहँदा पनि सधै सहयोगी, लगनशिल, क्रान्तिकारी र समाजप्रेमी व्यक्तित्वका रुपमा पश्चिम बागलुङले शाहीलाई चिन्दछ । व्यक्तिगत समस्यालाई भन्दा सामाजिक समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै देश, जनता र समाजप्रति समर्पित युवा नेताका रुपमा समाजले शाहीको परिचय दिन्छ । शाही, पद, प्रतिष्ठा भन्दापनि देश, जनता, पार्टि र न्यायिक आन्दोलनप्रति समर्पित निष्ठावान, मेहनेति, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ट र स्वच्छ छविको व्यक्तिका रुपमा सबैले चिन्दछन् ।
मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा, बागलुङ क्षेत्र नं. २, प्रदेश (ख) बाट राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि (नेकपा) को संयुक्त गठबन्धनका तर्फबाट साझा बाम उमेदवारका रुपमा चुनाव चिन्ह ‘गिलास’ लिएर आर्थिक समृद्धि र राजनैतिक स्थायित्व, पश्चिम बागलुङको आर्थिक, सामाजिक, तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका प्रतिवद्धताहरु सहित निर्वाचनमा होमिनुभएको छ । समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नु र जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि प्रदेश संसदमा नीतिगत भूमिकालाई जोडदिंदै जनताबीच पुगेको शाहीले बताउनुभएको छ । शाहीको उमेद्वारी, जनताबीच गरिएका प्रतिवद्धता र भूमिकाका विषयमा शाहीसँग हामीले यो अन्तरसम्वादबाट केही थप कुराहरु पनि लिएका छौं । ईबागलुङका संपादक राम सुवेदीले उमेदवार शाहीसँग गर्नुभएको अन्तरसम्वाद :
सुवेदी — स्वागत छ यहाँलाई, यो अन्तरसम्बाद मा ।
शाही : मलाई आफ्नो विचार राख्न यो अवसर दिनुभएको मा यहाँलाई र यहाँको मिडियालाई धन्यवाद ।
सुवेदी — के छ, निर्वाचन जितिन्छ ?
शाही ः त्यो त मतदान प्रक्रिया पछिको रिजल्टले बताउने कुरा हो । जहाँसम्म यस अघिको परिणाम र यसपटक पनि जनताले देखाउनुभएको सद्भाव, उत्साहले जितिन्छ भन्न सकिन्छ ।
सुवेदी — त्यस्ता के के एजेण्डा छन् जस्का कारण तपाइलाई यस क्षेत्रका जनताले मतदान गर्नुहुन्छ ?
शाही : एजेण्डा साझा छन् । यस अघि स्वर्गिय साँसद टेकबहादुर घर्ति मगरले निर्वाचन जितेर जानुभएको ठाउँ हो, उहाँले संसदमा पेश गर्नुभएका कतिपय योजनाहरु, नीति निर्माण तहको टेबुलमा छन् । त्यसलाई अगाडि बढाएर उहाँको अधुरा रहेका सपना पुरा गर्नु छ ।, जनताले त्यसबेला पनि कैयन आवश्यकताहरुसँग जोडिएका योजनाका खाकाहरु बाँकी छन् । ति बाँकी कार्यभार पूरा गर्नपनि मेरो उमेदवारी हो । नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीचका धेरै साझा एजेण्डाहरु छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिनिधिका रुपमा मलाई अघि सारिएको छ । त्यो गहन जिम्मेवारीको बोध मलाई भएको छ । निसीखोला, तमानखोला र ढोरपाटनमा ग्रामीण बस्तिहरुमा पुग्दा त्यहाँका जनताका धेरै आकाँक्षाहरु, आवश्यकताहरु र अनिवार्यताहरु पनि आफ्नै आँखाले हेरेर मैले त्यो जिम्मा पुरागर्नुपर्छ भन्ने अन्तरआत्मैबाट बोध भएको छ । समस्या धेरै छन् । केही तत्काल हुने केही समय लाग्ने गरि छन् । सबै कुराको हल गर्न मेरो दायित्व कर्तव्य र जिम्मेवारी ठानेको छु । जनताकाबीचमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छु । आजसम्मको सामाजिक जीवनमा मैले देखाएको इमान्दारिताको परक्षिण अझ गम्भीर ढंगले हुने भएकोले म अत्यन्त गम्भीर, सचेत र क्रियाशील ढंगले लाग्नुपर्ने छ । जनताको जनमत मलाई उमेदवारी तय गर्दा सहकार्यमा रहेको नेकपा र मेरो पार्टि राष्ट्रिय जनमोर्चाको पक्षमा रहेको कारण पनि मैले जित्छु, जनताका तमाम समस्याको हल गर्ने उमेदवारका रुपमा मलाई मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।
सुवेदी — तपाई निर्वाचनमा जाँदा, वा जनताकाबीचमा बोल्दा, मत माग्दा के प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ?
शाही : मैले खास गरी ४ तहबाट मेरो जिम्मेवारी र काम गर्ने तरिकाका सन्दर्भमा आफ्ना साझा धारणा बनाएको छु । त्यसमा पनि मलाई उमेदवारी समर्थन गर्ने अर्को जिम्मेवार पार्टि नेकपा र मेरो आफ्नो समर्थन रहेको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका बीचमा बनाइएका साझा धाराणालाई प्रतिवद्धता भित्र राखेको हुँ । मैले यस अघिपनि भने जस्तै, नीतिगत प्रतिवद्धता, आर्थिक प्रतिवद्धता, पूर्वधार विकास तथा शिक्षा सम्बन्धि प्रतिवद्धता, स्थानीय प्रतिवद्धताहरु मेरो चुनावी प्रतिवद्धता पत्रमा समेत हेन सक्नुहुन्छ र जनतालाई त्यो सबैको हातहातमा उपलब्ध पनि गराइसेकेको छु । त्यस अर्थमा मेरो नीतिगत प्रतिवद्धतामा लामो राजनैतिक आन्दोलनबाट प्राप्त, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता जस्ता संविधानका सकरात्मक उपलब्धीको रक्षा गर्ने नै हुने छ । त्यससँगै आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्नु, जनतन्त्र, जनजीविका र जनअधिकारको पक्षमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु, जनतालाई सुशासनको ग्यारेण्टी गरी भ्रष्टचार विरुद्ध जन अभियान सञ्चालन गर्नु हुने छ । त्यससँगै अहिलेको केन्द्रिकृत विकास नीतिको राम्रो भएन, यसले यो क्षेत्रको विकास देखि यहाँको सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक परिवर्तन जनताको पहुँचसम्म पुगेन त्यसका लागि मैले विकेन्द्रीयता र सन्तुलित विकास नीति लागु गरी बेग्ला बेग्लै क्षेत्रको विशिष्टताका आधारमा ग्रामिण विकासको योजना बनाउन पहल गर्नेछु ।
अर्को कुरा यहाँ पछाडि पारिएको समुदाय, वर्ग र जातजातिको अधिकार, भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्नुछ । यहाँको भिन्नै क्षेत्रीय, जातीय वा राष्ट्रिय एकतालाई मजवुद पार्नु छ । हाम्राबीचमा ऐतिहासिक, पुरातात्विक र साँस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण र संवद्धन गर्नुछ । यि कुरामा मैले ध्यान पु-याउनु पर्ने महसुस गरेको छु ।
सुवेदी — यहाँले भने जस्तै वा प्रतिवद्धतामा उल्लेख भए अनुसार, यहाँको गरिवी, पछौटेपन, आर्थिक विपन्नतालाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ । योजना के छन् ?
शाही : हो, यहाँले भन्नुभएको वा सवालका रुपमा ल्याउनुभएका कुराहरु म मात्र होईन यहाँका आम जनतालाई थाहा छ । महसुस पनि गरेका छौं । हाम्राबीचमा भएका तमाम समस्यालले हामीलाई सताएकै छ । जसरी एक नागरिकका हैसियतले म यो समस्या बुझ्छु त्यसरी नै समस्या समाधान गर्ने, नीति निर्माण गर्ने तहमा पुगेपछि मैले त्यो जिम्मेवारीलाई आत्मबोध गर्नैपर्छ । मैले जे कुरा जनताकाबीचमा बोलेको छु, प्रतिवद्धता पत्रमा लिपिबद्ध गरेको छु, त्यो अन्तरआत्ममा लागेका हामीले भोगेका र समाधान गर्नैपर्ने सवाल पनि उल्लेख गरेको छु । जस्का लागि मैले मेरो आर्थिक प्रतिवद्धताहरु छन् । जस्तो, यहाँको कृषि र कृषिजन्य उद्योगको विकास गर्नुछ । किसानको आयश्रोत बृद्धिमा मद्दत पु¥याउन विऊ, गोठसुधार, उन्नत पशु तथा पंक्षी, मत्स्य र मौरीपालनका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुछ ।
यहाँको अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित पार्न एकीकृत बस्ती विकास, खेतियोग्य जमिनको संरक्षण, वनजङ्गल र खानी क्षेत्रको विकास र संरक्षण गर्न रणनीतिक योजना तय गर्नुछ । सरकारले दिर्दै आएको जेष्ठ नागरिक, असमान क्षमता भएका व्यक्ति, अनाथ, असाह्य र बालवालिकाको भत्तामा थप गरी उनीहरुको दैनिक आवश्यकता सहज ढंगबाट पूरा गर्न सक्ने गरी उपलब्ध गराउनुछ ।
अहिलेको जटिल समस्याको रुपमा रहेको युवाको बढ्दो विदेश पलायनलाई रोक्नु छ । युवा उद्यमशील घुम्ती कोषको व्यवस्था गरी घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि फम, पशुपालन तथा सीपमूलक र उत्पादनशील कार्यमा लाग्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम तय गर्नुछ । पर्यटनलाई उद्योगको रुपमा विकास गरी ग्रामिण क्षेत्रमा पैदलमार्ग र होमस्टे स्थापना, जलयात्रा, रक गार्डेन तथा प्याराग्यलाईडिङ सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको आगमनमा बृद्धि ल्याउने मेरा प्रतिवद्धताहरु छन् ।
सुवेदी — यतिधेरै प्रतिवद्धताहरु अघि सार्नुभएको छ । चुनावका लागि हो कि यो गर्ने सक्ने हुन ?
शाही : यसो हेर्दा वर्तमानमा मेरा प्रतिवद्धताहरुमा प्रश्नहरु पनि उत्पन्न होलान तर जनताको आधारभूत आवश्यकता हुन् । ति पुरा गर्ने पर्छ । आजको भोली के गर्न सकिन्छ त्यसमा प्रयत्न गरौंला तर केही न केही त कसैले गर्नैपर्छ । चुनाव जित्ने तर जनताका काम गरिएन भने त के का लागि जित्नु प¥यो, कस्लाई जित्नु प¥यो र ? त्यस अर्थमा पनि मैले जिम्मेवारी पाएपछि, यहाँका जनताका आधारभूत आवश्यकताका सूची मेरो प्रतिवद्धतापत्र हो, मेरो बचन हो त्यसकारण पनि मैले गर्नै पर्छ ।
सुवेदी — यहाँले यस क्षेत्रको भौतिक विकासका सन्दर्भमा पनि लामो सूची बनाउनुभएको रहेछ, के यि कुरा पूरा गर्ने सम्भावना देखेर लेख्नुभयो, बोल्नुभयो कि ? चुनाव हो केही त बनाउनै प¥यो भनेर यस्तो कुरा गर्नुभयो ?
शाही : यसो हेर्दा अहिलेको विकास निर्माणको गति, परम्परा, परिपाटिले तपाई मलाई यो प्रश्न गर्नुभयो होला । हिजो पनि यस्तै हुन्थ्यो, अव पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने पनि होला तर सधै हिजोका गतिविधि, हिजोकै परिपाटि र परम्परा जनताले मान्नेवाला छैनन् । मैले मेरो प्रतिवद्धतामा यो प्रदेश क्षेत्रका तीनवटा पालिका निसीखोला, तमानखोला र ढोरपाटन नगरपालिकामा चालु मोटरबाटोलाई स्तरउन्नती र विस्तार गर्नुपर्छ भनेको छु । साथै जनताको आवइश्कतालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सडक निर्माणका लागि पहल गर्छु भनेको छु ।
जनताका आधारभूत आवश्यकताको पहिचानहुने गरि जनस्तरका समस्या खानेपानी, सिंचाई, तटबन्धन र भवन आवश्यकता धेरै छन् । त्यसलाई क्रमागत निर्माण गर्दै जाने र निर्माण भएका योजनाको पूर्न नीति निर्माण गरी आधुनिकिकरण मेरो प्रयत्न रहने भनेको छु । मैले सबै नागरिकको पहुँचमा निःशुल्क आधुनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने गर्दछु । यो हुनुपर्छ भनेर संसदमा बोल्नेछु भनेको छु । यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित उपयोग गर्न स्थानीय लगानी र जनसहभागीतामा साना जलविद्युत निर्माण, बन्द रहेका खानीको पूर्न सञ्चालन र जडिवुटी खेती तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय तह मै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने परिपाटिको नीतिगत अवधारणा बनाउन मैले प्रयत्न गर्छु भनेको छु । जनताले विश्वस गर्नुहुनेछ, म इमान्दार पुर्वक उहाँहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवरी लिन तयार हुनेछु, तयार पनि छु ।
सुवेदी — अहिले त गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकारपनि छन् । त्यहाँ समन्वय गरेर स्थानीय तहका योजनाहरु के कस्ता ल्याउनुभयो ?
शाही : हो, यहाँले भन्नुभएको जस्तो, गाउँका जनताको नजिकको सरकार भनेको म उमेद्वार रहेको प्रदेश क्षेत्रमा ३÷३ वटा सरकार छन् । उनीहरुले पनि जनताका समस्या समाधान गर्नेनै हो । मैले पनि तिनै स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर यहाँको विकास निर्माण, नीति निर्माण गर्ने हो । त्यसकालागि केही छलफलबाट साझा एजेण्डाहरु बनेका छन् । जस्तो ढोरपाटनमा रहेको एयरपोर्टको तत्काल सञ्चालनमा गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने छ । साथै यस क्षेत्रको पर्यटन विकासको योजना बनेका छन् । त्यसमा थप पहल गर्नुछ ।
राष्ट्रिय गौरवको योजना मध्यपहाडि लोकमार्ग र सालझण्डी ढोरपाटन लोकमार्गदेखि ग्रामीण तहलाई जोड्ने गरी ग्रामीण सडको निर्माण र विस्तार गर्ने आवश्यकता महसुस गरेर योजना बनाएका छौं । उत्तरगंगा जलासययुक्त जलविद्युत परियोजना बागलुङ कै भुगोलमा निर्माण गर्न जोड दिनुछ । बुर्तिवाङ र त्यसको नजिक रहेका सडक सञ्जाललाई सहरीकरण गर्दै स्तरबृद्धिका साथै कालोपत्रेको काम गर्ने र बुर्तिवाङ, बोङ्गादोभान, खुङ्खानी, तमान, दरबाङ हुँदै धवलागिरी वेसक्याम्पसम्म पर्यटकमैत्री सडक निर्माणको लागि पहल गर्नुछ । यस्तै बुर्तिवाङ, खुङ्गा, तमान, दरबाङ मोटरबाटो, बोहरागाँउ देखि प्युठान जोड्ने मोटर बाटो, चाचल, सामा, बराहताल मोटरबाटो, बुर्तिवाङ, मस्ती, अर्नाकोट मोटरबाटो, हुन्द्रफेदी, लुकुरबन, खोलाखर्क रमुवा मोटरबाटो निर्माण तथा विस्तार गर्ने योजना छन् । बुर्तिवाङ, निसी, निशलढोर, भुजीढोर, बराहताल, बोङ्गादोभान हुँदैं बुर्तिवाङ रिङरोड निर्माण गर्नुछ । बुर्तिवाङमा आधुनिक सहरीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै झिवाखोला, निसी, बोवाङ, तमान र ढोरपाटनमा साना सहरी विकास कार्यक्रम लागु गर्ने एजेण्डा पनि ल्याएको छु । पर्यटन विकासमा सहयोग पु¥याउनका लागि अर्नाकोट, नरसिंहकोट, बराहताल, रुद्रताल, जस्ता स्थानको विकास र पर्वद्धनमा ध्यान दिर्दै खुङ्खानी र बोङ्गादोभानमा रक गार्डेन र होमस्टे (घरवास कार्यक्रम) सञ्चालनको सम्भावना अध्ययन गरी निर्माणका लागि पहल गर्नुछ । ढोरपाटन क्षेत्रको एकिकृत पर्यटन विकासको लागि जोड दिनुछ । यस्ता तमाम कबाम गर्नुछ तर यो गर्ने भन्नेमात्र होईन गरेर देखाउन पनि पर्नेछ ।
सुवेदी — तपाई जनताकाबीचमा पुगिसक्नु भएको छ । स्थानीय स्तरबाट पनि त केही मागहरु, समस्याहरु आएका होलान नि होईन ?
शाही : हो, पक्कै आएका छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी मैले प्रतिवद्धताहरु जाहेर गरेको छु, प्रतिवद्धताहरु समेत गरिरहेको छु । जस्तो, ग्रामीण विद्युतिकरणलाई विस्तार गरी फलामे पोलयुक्त क्षेत्र बनाउने तथा निसीखोला, भुजीखोला र तमानखोलामा उत्पादन हुन सक्ने जलविद्युत उत्पादन गरी केन्द्रिय लाईनमा जडान गर्ने, किसानलाई पायक पर्ने गरी कृषि संकलन केन्द्र र दुग्ध संकलन तथा चिस्यान केन्द्रहरु स्थापनामा जोड दिने, ढोरपाटनलाई आलु पकेट क्षेत्र घोषणा गरी आलु उत्पादन वुद्धि गरी बजारीकरणको ब्यवस्था गर्ने, यहाँको पशु विकासका लागि चेलु च्याङ्ग्राको घुम्तीगोठलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पहल गर्नुका साथै फलफुल, पशुपालन, मौरीपालन, तरकारी तथा नगदे वाली, विऊ उत्पादनलाई व्यवसायिकरण र बजारीकरण गर्ने र पकेट क्षेत्र तोकी उत्पादनमा जोड दिने, कृषि, विज्ञान, कम्प्युटर जस्ता प्राविधिक विषयका क्याम्पस सञ्चालन गर्ने, खानेपानी अभाव भएका स्थानमा लिफ्टिङ मार्फत खानेपानी आपूर्ति गर्ने र सहज स्रोत भएका स्थानमा समेत स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने, बोङ्गादोभान र बोहोरागाउँमा न्यूनतम पनि २५ सैया भएको अस्पताल निर्माण गर्ने र बुर्तिवाङमा रहेको जिल्ला अस्पताललाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने, महिला, दलित तथा जनजातिका लागि विशेष आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, विद्यालयमा अपुग शिक्षक दरवन्दी थप गर्ने साथै अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधानमा विशेष जोड दिने यस्ता तमाम मागहरु, आवश्यकताहरु जनस्तरबाट गाउँ गाउँबाट टोल टोलबाट आएका छन् । यसलाई मैले जिम्मेवारी पूर्वक बहन गर्नुछ । जनमतका हिसावले पनि, जनचाहनाका हिसावले सायद लाग्छ यो जिम्मेवारी मैले पुरा गर्नेपर्ने अभिभाराको नजिक छु, यो मेरो दावी पनि हो । त्यसकारण जनताका सबै समस्या समाधान गर्ने सरकार त्यसको साभेदारीमा मेरो उमेद्वारी, उमेदवारीसँगै जिम्मेवारीको सम्भावीत दावेदारीका कारणपनि मैले मनबाटै योस विषयमा सोचिरहेको छु ।
सुवेदी — अरु विषय जो तपाइको मनमा लागेको छ, त्यसका लागि योजना बनाएको र तत्काल गर्ने कामको सूची के बनाउनुभएको छ ?
शाही : सबै कामहरु हुनैपर्दछ । सबै भन्दा चासोको विषय, बुर्तिबाङमा जिल्ला अस्पतालका रुपमा निर्माण भएको संरचनामा आवश्यक जनशक्ति सहितको प्रविधियुक्त अस्पताल स्थापना, निसीखोला र तमानखोला गाउँपालिकाका गाउँपालका स्तरको कम्तिमा पनि २५÷२५ शैयाको अस्पताल निर्माणमा जोड दिने मेरो सपना छ । त्यससँगै यहाँका जनताले भोग्नु परेको सरकारी काममा हुने प्रशासनिक झन्झटलाई न्यूनिकरण गरी छिटो छरितो तरिकाबाट एक टेबुल सबैका हुने गरी प्रशासनिक कार्यको व्यवस्था गर्ने मेरो प्रतिवद्धताहरु छन् । त्यसलाई पुरा गर्नुपर्ने छ ।
सुवेदी — हुन्छ, यहाँको महत्वपूर्ण समय दिएर, आफ्ना कुरा राख्नुभयो, आफ्ना प्रतिवद्धताका विषयमा विचार व्यक्त गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद ।
शाही -मेरो उमेदवारी, दुई बामपार्टिका साझा अवधारणाहरु, जनस्तरका समस्याका कुरा र मैले जितेपछि गर्नेपर्ने प्रतिवद्धताहरुलाई ईबागलुङ माफर्त राख्ने मौका दिनुभयो । यहाँलाई र यहाँ सम्वद्ध मिडियालाई धन्यवाद वयक्त गर्दछु ।